रेफरल स्प्यामको नयाँ लहरको बारेमा सेल्टल्ट विशेषज्ञ वार्ताहरू Google Analytics डेटा विच्छेदन गर्दै
यदि तपाईं देख्नुहुन्छ कि धेरै रेफरल ट्राफिक तपाईंको गुगल एनालिटिकलमा आउँदैछ, त्यसपछि होकर्सले तपाइँको जानकारी र साइटको विवरणहरू चोरी गर्न खोजेका छन् जब तपाइँ चिन्तित हुनुपर्दछ। प्रविधि विशेषज्ञहरूले हामीलाई धेरै सुझावहरू, चालहरू, र सन्दर्भ स्प्यामबाट कसरी छुट्याउने बारे सुझावहरू प्रदान गरेका छन्। उनीहरूले लड्नका लागि विभिन्न तरिकाहरू राखेका छन् र तपाईंको विचारका लागि सम्भावित समाधानहरूको सुझाव दिए।
यी दिन, रेफरल स्प्यामको धेरै टुक्रा Google Analytics को डेटा हानिकारक गर्दै छन्। यो वेबमास्टरहरूको लागि र वेबसाइटहरूको योगदानकर्ताहरूको लागि ठूलो चिन्ताको कुरा हो। आक्रमणहरूले ट्राफिक रेफरल रिपोर्टहरू प्रदान गर्दछन् र Google Analytics गुणहरूलाई ठूलो हदसम्म क्षति पुर्याउँछ। यो गलत हुनेछैन भन्न को लागी कि यो दुवै साना र ठूलो व्यापार मालिकहरूको लागि प्रमुख समस्या हो।
दुर्भाग्यवश, रेफरल स्प्यामबाट हटाउने कुनै उपाय छैन, तर आर्टम अर्गियरिरी (वरिष्ठ क्लाइन्ट सफलता प्रबन्धक) सेल्टल्ट को द्वारा प्रदान गरिएको निम्न युक्तिहरू यसको आगमनमा पुग्न सक्दछ र राख्न सक्दछ। हाम्रो वेबसाइट सुरक्षित र सुरक्षित।
Google Analytics स्प्यामहरू सिर्जना गर्दै आक्रमणकारीहरू (1 9)
यहाँ प्रश्न छ कि किन र कसरी आक्रमणकारीहरू Google Analytics स्प्याम उत्पन्न गर्छन्? वेबमास्टर्सहरूको लागि, यो प्रश्नको जवाफ फेला पार्न धेरै कठिन छैन। उनीहरूले उनीहरूको गुगल एनालिटिक्सको विवरण जाँच गर्न सक्छन् र तिनीहरूको साइटले नकली ट्राफिक प्राप्त गरिसकेका छन् भने। Source - oculus espelhado verde ray ban.वेबसाइट मालिकको लागि यो साइटमा कार्बनिक ट्राफिक उत्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण छ। रेफरल स्प्याम अकार्बनिक र नकली ट्राफिक उत्पन्न गर्न हैकरहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता रेफरल कार्यक्रमहरूको बिक्री र नेतृत्वले केहीको लागि राम्रो छ। हैकरहरू यी चालहरू मात्र भाइरसहरू, मालवेयरहरू फैलाउन र तिनीहरूको फिशिंग आक्रमणहरू सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्छन्। यसैले, यदि तपाइँले देख्नुहुन्छ कि तपाइँको साइटले अज्ञात स्रोतबाट संदिग्ध यातायात प्राप्त गरिरहेको छ भने, तपाइँ तत्काल तत्काल लागू गर्नुपर्दछ।
रेफरल स्प्याम कसरी हुन्छ? (1 9)
अब हामी तपाइँलाई बताउदै जाँदैछ रेफरल स्प्याम कसरी हुन्छ? धेरै ह्याकरहरू तपाईंको साइटहरूमाथि आक्रमण गर्छन् र बोटहरू प्रयोग गरेर तपाईंको डेटा चोर्ने गर्छन्। तीमध्ये धेरै मानिसहरू धेरै ठूला व्यक्तिहरूलाई ट्रिगर गर्न विभिन्न प्रकारको ब्वाटेननेटहरू प्रयोग गर्छन्। केही आक्रमणकारीहरूले अझ अधिक वेबमास्टरहरू संलग्न गर्न मात्र नकली हिट र भूत दृश्यहरू उत्पन्न गर्छन्। यसको लागि, तिनीहरूले तपाईंको साइटमा बटहरू पठाए र तपाईले कार्बनिक ट्राफिक प्राप्त गर्दा यो बन्द गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यस्तो आक्रमणकारीहरू Google Analytics ट्रयाकहरू र जाभा स्क्रिप्टहरू चलाउनका लागि तपाइँको सर्भरबाट डेटा संकलन गर्न चलाउँछन्। त्यसपछि तिनीहरू यस डेटालाई धोखाधड़ी गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गर्छन्।
हामी तथ्यहरू बारे जान्दछौं कि गुगल एनालिटिक्स एक विश्वसनीय, प्रामाणिक, र राम्रो-आधारित उत्पादहरु मध्ये एक हो जुन वेबसाइटहरु को सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न को लागि बनाईएको हो। तपाईं Google Analytics र अन्य समान प्लेटफार्महरू प्रयोग गरेर तपाईंको साइट कस्तो भइरहेको अनूठा विचारहरू ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्रिय हुनको लागी Google Analytics को लागि तपाईंको साइटमा एक कोड सम्मिलित गरिएको छ। यो कोड प्राय: हैकरहरूको चोरी गरिन्छ जसलाई अनुमान लगाउन सजिलो छ र तिनीहरूको अवैध गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रत्येक वेबमास्टरको लागि स्पष्ट छ कि Google Analytics ले एक खातामा पचास गुणहरूलाई अनुमति दिन्छ। प्रत्येक सम्पत्तिमा यसको क्रमिक संख्या छ। वेबमास्टरको रूपमा, यो सीरियल नम्बर अनुमान लगाउन कठिन वा असम्भव बनाउन तपाईंको कर्तव्य हो। तपाईले यसलाई आफ्नो सेटिङ पृष्ठमा गएर यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।